17 “Me honhom abubu,+ me nkwa nna ahi;Asiei wɔ hɔ ma me.+ 2 Afɛwdifo na wɔatwa me ho ahyia,+Na m’ani tua wɔn atuatew no. 3 Mesrɛ wo, kora m’awowade so.+Hena na obekyia me nsam+ de adi agyinam? 4 Wode nhumu ahintaw wɔn koma.+Ɛno nti na womma wɔn so no. 5 Obi tumi ka kyerɛ nnamfo sɛ wommegye wɔn kyɛfa,Bere a nea ne mma ani da so mpo bɔ wɔn.+ 6 Ɔde me ayɛ aman akasabebu,+Na mayɛ onipa a wɔtetew ntasu gu n’anim.+ 7 Ahometew ama m’aniwa ayɛ kusukusu,+Me honam akwaa nyinaa ayɛ sɛ sunsuma. 8 Teefo de ahodwiriw hwɛ,Na nea odi bem nso bo fuw ɔwaefo. 9 Ɔtreneeni bata ne kwan+ ho daa,Na nea ne nsa ho tew+ kɔ so nya ahoɔden.+ 10 Mo nyinaa, momfa mmra bio. Montoa so ɛ,Na me de, minhu onyansafo biara wɔ mo mu.+ 11 Me de, me nna atwam kɔ,+ me nsusuwii agye agu,+Ade a me koma pɛ no. 12 Wɔde adesae si adekyee ananmu+ na wɔka sɛ:‘Hann abɛn nea esum wɔ.’ 13 Sɛ mekɔ so twɛn mpo a, Adamoa* na ɛbɛyɛ me fie;+Esum+ mu na mɛsɛw me kɛtɛ. 14 Mɛfrɛ amoa sɛ,+ ‘Me papa ne wo!’Na mafrɛ mmoawa sɛ,+ ‘Me maame ne me nuabea!’ 15 Na afei, ɛhe na m’anidaso wɔ?+M’anidaso​—hena na wahu? 16 Ebesian akɔ Adamoa adaban mu,Bere a me ne m’anidaso nyinaa besian akɔ dɔte mu no.”+